Home Wararka Caalamka facebook.com
Biyihii Wabiga Shabeele Ku Fatahey Magaalada Dhexdeeda oo Wabigu dib u Celshey.
Dadka ayaa nafis dareemay qeybo ka mid ah magaalada Beledweyne kaddib markii uu Wabigu bilaabay in uu dib u celiyo daadadkii dhawaan ku fatahay magaalada. Waddada dheer ee dhaxmarta bartamaha magaalada oo meelmihii ugu danbeeyay leysaga gudbayay Doomo ay ku deeqeen gaar ka mid ah hay’addaha samafalka ayaa hadda u...
Baledweyne Dadka Fatahaadu Saameysey oo Jaaliyado Soomaaliyeed Lacago ugu Deeqeen.
Iyadoo wali uu soconayo gurmadka loo fidinayo dadkii ku barakacay Fatahaada Wabiga Shabeele ee magaalada Beledweyne ayeey Shirkadda Xawaallada Amaana gaarsiisay Boqolaal qoysas ah deeq lacageed oo ka timid Jaaliyaddo Soomaaliyeed. Deeqdan lacageed oo ka kala timid Jaaliyadaha dalalka Sweden gaarn ahaan magaalada Nesto, Australia magaalada Berto iyo dalka Mareykanka...
Gobolada Waqooyi Bari Soomaaaliya oo Duufaan ay Hore u Saadaalisey FAO ka Bilaabatey Sida lagu Soo Waramayo.
Sida ay saadaalinayaan khubarada saadaasha hawada, dabeylo ka kacay gacanka cadmeed ayaa isu beddelay duufaan xoog leh oo saameyn ku yeelatay qeybo ka mid ah xeebaha Somalia. Duufaantan oo loogu magac daray Sagar ayaa qeyb ka ah dabeylaha loo yaqaan Maansoonka, gaar ahaan waxey ka soo farcantay sida ay baahiyeen...
Hay’adda CIA da Mareykanka oo Markii ugu Horeysey Haweeney Hugaanka u Qabatey.
Senate-ka Maraykanka ayaa markii u horraysay haweenay u idmaday in ay hogaamiso hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA, inkastoo ay door ku soo yeelatay barnaamij ay hay'addani fulisay 9/11 oo dadka lagu baarijiray. Ansixinta Gina Haspel ayaa timid iyadoo kala qaybsanaan xisbi ay ka jirtay aqalka arrintaas oo la xiriirtay biyo...
Dekedda Magaalada Muqdisho oo R/wasaare Khayre uu Kormeer ku Tagey Si uu ugu Kuur galo hawlaha Dekedda.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa kormeer howlleed ku tagey dekadda Muqdisho oo ay ka socdaan howlo isugu jira dhoofka iyo soo dajinta shixdaha kala duwan. Kheyre ayaa kulan gaar ah la yeeshay Wasiirka Maaliyadda iyo maamulka Dekadda, waxaa uuna ka xog-wareystay qaabka ay u shaqayso dekaddu, caqabadaha...
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isbitaalka Garoowe ku booqdey Askartii ku dhaawacantay dagaalkii Tukaraq. Waxaa Gaas booqashadiisa ku wehlinayay Wasiirka Wasaaradda maaliyadda, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Wasiiru dowlaha Wasaardda Duulista iyo Hawada iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland. Dhaawaca ciidamada Puntland ee madaxweyne Gaas uu...
Afhayeenka Barlamaanka oo Baaq u Direy Dhinacyada Ku Dagaalamaya Gobolka Sool.
Kulanka Guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha Shacabka JFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa looga hadlay dagaaladda maalmihii la soo dhaafay ka soo cusboonaaday degaanka Tukaraq, wax ka qabashada fatahaadaha ay sameeyeen wabiyada dalka iyo sidoo kale dardar gelinta howlaha kalfadhigan iyo kan...
Bandhiga hanaanka loo dhanyahey oo in ka badan 25 xisbi siyaasadeed ay soo hor dhigeen 500 qof magaalada Muqdisho.
Kulan weyn oo ay soo qaban qaabiyeen xisbiyada siyaasadeed ee dalka qaar kamid ah ayaa lagu qabtey magaalada Muqdisho kaas oo ay kasoo qeyb galeen Wasiiro Xildhibaano,Odey dhaqameedyo,Culimada diinta,Madaxda xisbiyo siyaasadeed oo ka badan 25 xisbi,Xubnaha xisbiyada qaarkood,Haween,DHalinyaro iyo marti sharaf kale. Xisbiyada ayaa waxey kulanka kusoo ban dhigeen barnaamij...
Qarax ka dhacey masjid ku yaal magaalada addis-ababa oo ay ku dhaawacmeen 24 qof.
Ugu yaraan 24-ruux ayaa ku dhaawacmay Qarax bam oo lagu weeraray masjid ku yaalla magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, maq-ribnimadii shalay oo Jimco ahayd, afar ka mid ah dhaawacyada ayaa la sheegay inay yihiin kuwo culus, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya. Wasiirka warfaafinta xukumadda Itoobiya, Getachew Reda oo...
Guud ahaan dalka Kenya, ayaa maanta waxaa looga dabaal-dagayaa xuska 52 sano guuradii ka soo wareegtay markii Kenya ay xornimadeeddii ka qaadatay wadanka Britain oo ku beegneyd 12-kii bishii December, 1963-dii. Xuska maalinta xorniyadda Kenya ee loo yaqaano (Jamhuri Day), ayaa siyaabo kala duwan waxey oga dhacday maanta Kenya oo...